ထိုင်ခုံများအတွက်အထူးစက် - တရုတ် Kingswel Machinery
ထိုင်ခုံသည် HC90 အထူးစက်
အကောင်းဆုံးသိအမှတ်တံဆိပ်စီးရီး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ဖောက်သည်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏရှိသည် ဖြစ်. , ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံး, လက်တွေ့ကျသောရလဒ်များနှင့်ဂန္ကျော်ကြားသည်
1. မှိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့် clamping system ကို In-အဆင့်ဂီယာဘီးနှင့်ထိန်သိမ်းချမှတ်အမွှာ-ရိုးညှပ်သည့်ကိရိယာမှာရည်ရွယ်ထား;
မှို clamping 2. ရေနံတိုင်ကီပုံနှိပျ;
3. , မှို platen ၏ကျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့ X ကိုဆွဲလက်မောင်းမှို platen ်ပေးရန်လက်မောင်းဘီဗဲလ်ဆွဲထုတ်မှိုများအတွက်အာကာသကြီးမားသည်, 45 ​​°ဖြစ်၏
4. extrusion system ကို extrusion များ၏အရေအတွက်ကြီးမားသည်, ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအတွက်မောင်းနှင်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားချမှတ်;
5. လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါငျးတို့သကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်ချမှတ်သည်ပရိုဂရမ်မာ optimized သည်ဂျပန် Panasonic ကအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ PLC ်ပေးရန်။
● Max.volume ထုတ်ကုန်များ၏ ------------------------------ 60L
ဝက်အူအချင်း -------------------------------- 90mm
ဝက်အူအရှည် / DIA ။ အချိုး ---------------------------- 25: 1
ပလပ်စတစ်စွမ်းရည် ------------------------- 150 ကီလိုဂရမ် / h (စတင်)
အပူပါဝါ ------------------------------ 25 KW
------------------------------ 45 KW ပါဝါမောင်းနှင်
● Clamp စနစ်က
Max.dia ။ 350mm ----------------------------- သေ
သေဆုံး၏အပူပါဝါ --------------------------- 20 KW
စုဆောင်းခြင်း၏ Volume ကို ------------------------- 6L (8L)
Platen အတိုင်းအတာ (W × H ကို) ------------------ 900x800mm
--------------------------------- 270 KN အင်အားသုံး Clamping
မက်စ်။ platen အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း ------------------------ 400-1050mm
ကိရိယာ (ပျင်းရိသံသရာ) ------------- 600PC / H ကို clamping ၏ Max.speed
မှိုအတိုင်းအတာ (W * H ကို) ---------------------- 700x1000mm
မှို၏အထူ ---------------------------- 405-600mm
● Hydraulic System ကို
小泵အသေးစားစုပ်စက် ----------------------------------- 16MPa
Big စုပ်စက် ------------------------------------ 12 MPa
ရေနံစုပ်စက်၏မော်တော်ပါဝါ -------------------------- 30 ရက် KW
parison အထူ၏မော်တော်ပါဝါ -----------------------4KW
Power ကဗို့အား ---------------------------------- AC380V
cable ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း ------------------- သုံးအဆင့်လေးဝါယာကြိုးစနစ်က
စုစုပေါင်း rated ပါဝါ ------------------------------ 124 KW
နောက်တစ်ခု: tool ကိုကိစ္စတွင်အထူးစက်